के पारस क्यानको निलम्बन फुकुवाले खुसी छैनन् ? खेल्छु भन्ने नखेल्ने किन गर्छन् ?
काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)माथि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट संघ (आईसीसी)ले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवापछि राष्ट्रिय टिमका पूर्वकप्तान पारस खड्का नेपाली क्रिकेटबाट टाढिँदै गएको देखिएको छ । यसले क्रिकेट जगतमा एउटा प्रश्न उठेको छ – के निलम्बन फुकुवाले पारस खुसी छैनन् ? उनका गतिविधिले भने खुसी नभएको देखाउँछ ।
१५ अक्टुबरमा नेपाली क्रिकेटका लागि अप्रत्याशित घटना सार्वजनिक भयो – कप्तान पारस खड्काले कप्तान पदबाट राजीनामा घोषणा गरे। आईसीसीको निलम्बन फुकुवामा खुशी भएको नेपाली क्रिकेटमा पारसको त्यो निर्णय पक्कै पनि निराशाजनक थियो। पारसले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा घोषणा गरेपछि क्यान अध्यक्ष चन्दले डिसी नेपालसँग दिएको प्रतिक्रियामा भनेका थिए, ‘निलम्बन फुकुवाले सबै खुशी हुँदा उहाँ दुःखी हुनु भएको हो ?’
क्यानले पारसलाई राजीनामाबारे पत्र लेखेरै सोधेपछि इमेलमार्फत राजीनामा बुझाए। त्यसपछिमात्र क्यानले नयाँ कप्तानका रुपमा ज्ञानेन्द्र मल्ललाई ‘अर्को निर्णय’ नहुँदासम्मका लागि कप्तान बनायो।
यसपछि आईसीसीले मेरिलेबोन क्रिकेट क्लव (एमसीसीसँग) तीन प्रारुपमा खेल्ने नेपाली टिम घोषणा गर्दा पारस एक दिवसीय टिममा मात्र परे। सोमबार कीर्तिपुर मैदानमा एमसीसीसँग खेल हुँदा पारस भने मैदानमा देखिएनन्। यसपछि भने पारस र क्यानबीच खटपट रहेको आशंकालाई बल पुर्यायो। क्यान सचिव तथा प्रवक्ता अशोकनाथ प्याकुरेलले डिसी नेपालसँग भने, ‘उहाँले खेल्नुपर्ने हो, किन खेल्नु भएन कुनै जानकारी छैन।’ टिममा रहेको सबैभन्दा वरिष्ठ खेलाडी मैदानमा नदेखिनुलाई नेपाली क्रिकेटमा कुनै उथलपुथलको संकेतका रुपमा बुझिएको छ।
स्रोतका अनुसार आईसीसीले टिम घोषणा गर्नुअघि नै पारसले आफु पारिवारिक कारण खेल्न नसक्ने जानकारी गराएका थिए। तर, किन आईसीसीले उनलाई टिममा समेट्यो यो प्रश्न भने अनुत्तरित छ।